Soo iibso Facebook Comments - TurboMedia.io
Maxaan filan karaa marka aan iibsado Facebook Faallooyinka?
Wuxuu ka caawinayaa kordhinta hawlgalkaaga sida Tusaalooyinka & Sawirada
Maxay tahay inaan iibsado Facebook Faallooyinka?
Adeeggani wuxuu si dhab ah kuu caawin karaa inaad ku dhufatid wadahadalkaaga posts. Marka aad soo iibsanayso Faallooyinka, waxay noqon karaan kuwo si dhammeystiran loo xallin karo si aad ugala hadasho wadahadalka jihada aad rabto.
Waxaad heli kartaa in yar sida faallooyinka 5 lagu dhajiyo hal boostada. Waxay noqon karaan jawaabaha mawaadiic kale ama loo isticmaalo in ay bilaabaan wadahadal mowduuc gaar ah. Waxa kale oo ay aad muhiim u yihiin in ay kaa caawiyaan isu-dheelitiridda jacaylkaaga iyo aragtiyada
TurboMedia.io waxay bixisaa faallooyinka tayada ugu sareysa ee laga heli karo internetka. Waxaan mar walba ku dhejineynaa faallooyinka xagga boostadaada.
Goorma ayaa la ii soo diri doonaa Faallooyinka Facebook?
Waxaan ka dambeyn karnaa adeegyadayada 100% waxaanan bixin doonaa amar kasta oo buuxda.
Adeegyadayadu waa 100% ammaan ah in la isticmaalo. Si ka duwan adeeg-bixiyeyaasha adeegsadaha badan kama codsaneyno ama u baahannahay lambarkaaga Aqoonsiga Lambarka Bulshada. Sidaa daraadeed, ma xakamaynayno xisaabtaada ama kugula talin doonin wax kasta oo ay tahay inaanu sameyn. Adeegyada aan bixino waxaa la tijaabiyaa waqtiyo aan tirooyin lahayn oo sii wadaan cusbooneysiinta iyo horumarinta codsiyada warbaahinta bulshada si loo xaqiijiyo natiijooyinka tayada ugu sareysa iyo kuwa ugu wanaagsan.
TurboMedia.io ayaa bixisa adeegga ugu sareeya ee tayo sare leh iyo adeegyada ugu caansan ee Suuq-geynta Bulshada ee internetka.
Ku kalsoon tahay 1,000,000 + Macaamiisha
TurboMedia wuxuu bixiyay kor u kac degdeg ah oo aan u baahnayn inaan xisaabtamkayaga warbaahinta bulshada ka helno xisaabtanka oo aan ku bilowno helitaanka koboca organic!
Waxaan isku dayay dhowr ka mid ah tartamayaasha oo waxay had iyo jeer ku ballanqaadeen oo ay hoos u dhiibeen, ama ma aysan keenin! TurboMedia wuxuu na siiyay XADGUDUBA waxa ay ku dheheen, si dhakhso ah iyo iyada oo aan wax qadhaadh lahayn. Waad ku mahadsantahay caawimadaada!
Hal shey oo aan ogahay, TurboMedia waxay na siisaa wixii aan u dalbano mar kasta! Waxay leeyihiin adeegyo tayo sarre leh iyo kooxda taageerada macaamiisha waxaan ka dhex arkay tartamayaasha!
Eeg macnaha ay macaamiisheena ku leeyihiin marka ay iibsadaan Custom Facebook Comments noo ...
dib u eegista 0
Service 250 Instagram Followers ($ 10) 500 Instagram Followers ($ 20) 1,000 Instagram Followers ($ 35) 2,000 Instagram Followers ($ 50) 5,000 Instagram Followers ($ 90) 10,000 Instagram Followers ($ 150)
Service 100 Instagram jeclo ($ 6) 200 Instagram jeclo ($ 9) 500 Instagram jeclo ($ 14) 1,000 Instagram jeclo ($ 25) 2,000 Instagram jeclo ($ 39) 5,000 Instagram jeclo ($ 59) 10,000 Instagram jeclo ($ 89) 20,000 Instagram jeclo ($ 129) 50,000 Instagram jeclo ($ 179)
Ku dar gaadhigii Ku dar gaadhigii Ku dar gaadhigii Ku dar gaadhigii Ku dar gaadhigii Ku dar gaadhigii Ku dar gaadhigii Ku dar gaadhigii Ku dar gaadhigii